Cast Iron Iron, Cast Iron Cookware, Cast Iron Enamel Pot - SANXIA
SANXIA dia natsangana tamin'ny taona 1998 dia orinasa mpamokatra matihanina mampiditra tsy miankina R & D, famolavolana indostrialy, famokarana bobongolo, famokarana vokatra, fifehezana kalitao ary marketing amin'ny lakozia. Izy io no manana trano fanatobiana vy lovia ambony indrindra eto an-tany ary izy koa no orinasa mpamokatra lehibe indrindra eto an-tany.
Fahasalamana sy tsy fahampian'ny solika setroka avo lenta vy fryi ...
Ny sarimihetsika fanendasana vy tsy manam-paharoa dia azo ampiasaina ho ...
Fonosana vy tsy mitongilana kalitao avo lenta ...
Mahomby sy matsiro enamel cast vy vy ...
Sanxia dia iray amin'ireo tobin'ny bobongolo ao an-dakozia lehibe indrindra any Azia ary mpanamboatra lakozia vita amin'ny vy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Nandray anjara tamin'ny famolavolana ny fenitry ny vokatra vy enamel China.
Tamin'ny taona 2019, i Sanxia dia nahazo ny laharana voalohany tamin'ny orinasa folo voalohany tao amin'ny indostrian'ny entam-barotra hazavana ao Shina.
Sanxia dia mandray ny famolavolana indostrialy ho tapany lehibe, manatsara hatrany ny asan'ny vokatra sy ny ambaratongam-bikan'ny vokatra, ary manana patanty 40 mahery sy patanty fisehoana am-polony.
Miaraka amin'ny "pot iron iron of rock casting" any Sanxia, ​​nahazo ny loka German Red Dot Design Award ny orinasa tamin'ny taona 2020.
Miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao tonga lafatra, ny vokatra dia nandalo ny fitsapana matihanina an'ny FDA sy LFGB.
Sanxia dia manana foibe fitiliana laboratoara 2000 metatra toradroa, tamin'ny taona 2020, nomena ny fankatoavana ny Komitin'ny fankatoavana nasionalin'ny China momba ny fanombanana ny fanarahana (CNAS).
namel Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, Cast Iron Skillet, xtreme Iron Skillet, ncoated Cast Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet,